Iningi 5-HTP yaziwa nangokuthi oxitriptan (INN) akhishwa imbewu bok ekhuphuka izihlahlana bomdabu eNtshonalanga Afrika, okuthiwa i-Griffonia simplicifolia isitshalo.
5-HTP noma "hydroxy L-tryptophan" (5-Hydroxytryptophan) kuyinto ngokwemvelo-okwenzeka acid acid futhi eyandulela kanye Lesisemkhatsini umzimba ku biosynthesis we neurotransmitters serotonin futhi melatonin kusukela tryptophan. 5-HTP is baguqukela serotonin neurotransmitter (5-HT), ngosizo Vitamin B6.This kwenzeka kokubili izicubu sezinzwa futhi esibindini. 5-HTP kweqa kusivimbeli gazi ebuchosheni (ngenkathi 5-HT kungaqali). Ngakho-ke lezi zinsiza zisebenze nge 5-HTP kwandisa ukukhiqizwa-serotonin.
izinzuzo zezempilo ezingu-5 HTP
Kabanzi asetshenziselwa ukusiza ukukhuluphala (ukuzincisha ukudla), PMS, migraines, ukucindezeleka kwengqondo, ukukhathazeka, ukuqwasha nokuziphatha umlutha. 5 HTP kwandisa ukukhiqizwa-serotonin. Serotonin amazinga e isimiso sezinzwa kubalulekile ukuze izici eziningi kangaka ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Serotonin unesibopho imizwa wokuba kahle, baneliseke futhi amaphethini evamile ubuthongo. Ukukhuluphala, PMS, migraines, ukucindezeleka kwengqondo, ukukhathazeka, ukuqwasha nokuziphatha umlutha konke zihlotshaniswa amazinga aphansi le-serotonin. Serotonin udlala indima ebalulekile yokulawula intukuthelo, ulaka, izinga lokushisa komzimba, isimo, ubuthongo, isifiso sobulili, isifiso, futhi umzimba, kanye inkanuko ukuhlanza.
Kucatshangwa yokuphila okumatasa yesimanje yokucindezeleka imikhuba emibi yokudla kwehlisa izinga le-serotonin emzimbeni. Kuyaziwa ukuthi ukuhluthuka, ubudlova, ukuphelelwa yisineke, ulaka nokukhathazeka imbangela okukhathazayo eyaziwa umzimba ukukhulula-serotonin. Lokhu-serotonin ke kufanele agcwaliswa umzimba kusuka ukudla okudlayo. Kodwa-serotonin ayitholakali inqwaba e ukudla okunamafutha kakhulu ngakho umzimba kumele kwenza kube ngokwayo ukudla aqukethe L-tryptophan, ezifana ushokoledi, i-oats, ubhanana, izinsuku omisiwe, ubisi, iyogathi, cottage shizi, inyama, inhlanzi, turkey , inkukhu, Sesame, chickpeas, namantongomane. Ngakho abantu abaningi iyakuthanda ukudla efakwe (amafutha kanye carbohydrate), ikakhulukazi uma ucindezelekile, okubangela kwesisindo, ukucindezeleka, ubuhlungu bekhanda, lapho ukhwehlela nobuhlungu bomzimba.
Atkins Ukudla - ukunciphisa izifiso
izifundo zokwelapha luye lwabonisa ukuthi enezela nge 5-HTP imiphumela emihle e kwesisindo, nokucindezeleka. Ithuthukisa ezindleleni zokulala futhi kunciphisa izifiso carbohydrate labo ku ongaphakeme carbohydrate ukudla okunamafutha (njenge-The Atkins Ukudla). Noma ubani osebenzisa i uhlelo kwesisindo afana Atkins Ukudla, babengayithola nokuncipha izinga le-serotonin ngenxa yokuthi ama-carbohydrate zishukumisa ukukhiqizwa serotonin emzimbeni. Serotonin ukukhululwa kwabangela ngumuntu umthwalo carbohydrate (ushukela njll) futhi kucatshangwa ukuthi Yingakho ke ngokuvamile alangazelela Amakhabhohayidrethi ucindezelekile njengoba sifuna ukugqugquzela lokhu kukhululwa le-serotonin. Lapho ingqondo ukhiqiza serotonin, ukungezwani is saba ngcono. Ngakolunye uhlangothi lapho ubuchopho ukhiqiza Dopamine noma norepinephrine (noradrenaline), sivame ucabange futhi bathathe isinyathelo ngokushesha kakhudlwana futhi ngokuvamile isaphapheme. Ngakho-ke ukudla ukudla okumahhadla nomoya kubonakala sizole, kuyilapho amaprotheni ukwandisa uhlale uphapheme.
Ukuthatha 5-HTP Izithako ongamisa lo ukuqalekela amafutha kanye carbohydrate, kanye nokunikeza umzimba ngezindlela ukulawula zonke lezo neminye imisebenzi engenhla, ezifana intukuthelo, isifiso sokulala.
Siza nge Ukudangalane Ukukhathazeka
Olunye ucwaningo osekwenziwe ku-5 HTP futhi ibonisa ongakwazi ukusiza nokucindezeleka futhi mhlawumbe nokukhathazeka, uvalo disorder, izinkinga zokulala kanye nokukhuluphala ngokweqile. 5-HTP kubonakala ukuthi kube nemiphumela efanayo SSRI (okukhethwayo Serotonin Phinda abatholako inhibitors) antidepressant.
Kadokotela ukuthi ukukhulisa izinga le-serotonin kuyabekwa kuwo onkhe lezi zinkinga, kodwa abantu abaningi bakholelwa 5-HTP kuyindlela yemvelo ukufeza into efanayo.
Ukuze ngcono ubuthongo, abantu abaningi Kunconywa ukuthatha 5-HTP 30 amaminithi ngaphambi kokulala, njengoba ngaphandle ukuthela Serotonin, 5-HTP futhi ukhiqiza melatonin, okuyinto hormone ubuthongo-ukuyenga. Umthamo evamile kungaba 50mg noma ithebhulethi 100mg. Imiphumela ukuthatha 5-HTP okungase kuthintwe ngaphakathi amaminithi 10 kuya ku-30.
Zama ukuthenga 5-HTP okuyinto iqukethe B6 njengoba Vit B6 luyadingeka 5-HTP ukuguqulwa ku-serotonin.
Ukweqiwa Ingaphezulu kakhulu Ubonakala adingekayo kwesisindo kanye nokunciphisa migraines. kubonakale imithamo kuze kufinyelele emhlabeni 900mg ngosuku okumele kabanzi kubika.
5-HTP ngokuvamile ibekezelelwe ingcono kakhulu antidepressant bendabuko. Okweqile 5-HTP kucatshangwa akheka futhi excreted, ikakhulukazi lapho ezithathwe nge Vitamin B6.
Kungani ungazami abanye namuhla bese ubona ukuthi kakhulu kunganciphisa izifiso zakho, ukucindezeleka futhi intukuthelo amazinga, kanye ulale kahle ebusuku!
isikhathi Iposi: Dec-13-2016
5-HTP Izinzuzo Iningi 5-HTP yaziwa nangokuthi oxitriptan (INN) akhishwa imbewu bok ekhuphuka izihlahlana lwendabuko ...
Bee Imikhiqizo: I Supe Original ...
Abathobekile honey bee ingenye eziphilayo ezibaluleke kakhulu bemvelo. Izinyosi zibaluleke ukwenziwa ukudla ukuthi thina ...